Kuxwayiswe amakhansela e-ANC ngokunyamalala uma esevotelwe – LIVE Express
uNobhala Jikelele we-South African Communist Party (SACP), u-Dr Blade Nzimande, usexwayise labo abazomela i-African National Congress (ANC) njengamakhansela okhethweni lohulumeni basekhaya ukuba banganyamalali emiphakathini abasuke bekhethwe kuyona uma sebevotelwe.
u-Nzimande ubekhuluma emcimbini we-ANC wokugaya amavoti okokugcina ngaphambi kokhetho lohulumeni basekhaya mhlaka-3 August 2016.
“Sicela-ke kodwa ukuthi-ke kumakhansela aKhongolose: ngane zakwethu, uma sinivotela akusilo isheke elingabhaliwe. Sicela nisebenze kanzima, sicela nibize imihlangano yemiphakathi – nizobika noma ngabe kunezinkinga ezikhona. Ninganyamalali,” kusho u-Nzimande.
uNzimande uphinde wanxusa abasebenzi kanye nabantu baseNingizimu Afrika ukuthi bangahlali nje basonge izandla uma sebevotile, kodwa babambe iqhaza emihlanganweni yemiphakathi ukuze benze isiqiniseko sokuthi omasipala bayasebenza.
Ube esenxusa uMengameli wezwe, u-Jacob Zuma, ukuba akhulume nabaqashi ngaphambi kwaLwesithathu ukuze badedele abasebenzi ukuba bayosebenzisa ilungelo labo lokuvota ngoLwesithathu, mhlaka-3 August 2016 – wathi akumele abasebenzi bavinjelwe ukuba bayovota.
Kuzodla u-R576 million ukulungisa umonakalo owadalwa yizikhukhula eThekwini – umbiko